Kor joogtada doorashada Somaliland - BBC Somali
Kor joogtada doorashada Somaliland
Image caption Codeynta Doorashada madaxtinimada Somaliland waxa ay dhacday Sabtidii
Kor joogtada caalamiga ah ee doorashadii Sabtidii ka dhacday Somaliland ayaa shir jaraa'id oo maanta ay ku qabatay magaalada Hargeysa, ka sheegtay in ay doorashadu u dhacday si wanaagsan.
Kor joogtada caalamiga ah oo ka kala socday wadamo ka tirsan qaaradda Yurub iyo Mareykanka ayaa waxa ay sheegeen in goobaha ay tageen ay cod bixintu si wanaagsan uga dhacday.
Kor joogtadu waxaa ay sheegeen in ay jireen cillado yar yar oo farsamo oo ka dhacay goobaha doorashada qaarkood, laakiin ay ahaayeen wax caadi ah marka la eego doorasho baaxaddaasi leh oo ka dhacda waddan Afrika ah.
Kor joogtada waxa ay sheegeen in inta badan ay tageen goobaha ay codbixintu ka dhacaysay ee gobolada.
Weli waxaa socda tirinta codadka doorashada, lamana oga murashaxa ku guuleystay Madaxtinnimada Somaliland.
Somaliland, waxay gooni isu taagtay 1991, oo ay ka go'day Jamhuriyaddii Soomaaliya.
Somalia waxay awal ka koobnayd Somaliland oo Ingiriiska xorriyad ka qaadatay 26-kii June 1960 iyo Somalia inteeda kale oo ay maamulkii Qaramada Midoobay ee Talyaanigu wakiilka ka ahaa uu u xuubsiibtay xorriyad buuxda 1-dii July 1960.
Tan iyo markii ay Somaliland gooni isu taagtay waxaa inta badan ka jirtay nabadgelyo iyo horumar u badan xagga hantida gaarka ah oo u badnayd tobankii sano ee u dambeeyay.
agga maamulkana waxay ku tallaabsatay horumar xagga axsaabta siyaasadda, iyo doorashooyin heer walba leh oo ka dhacay golayaasha degaanka, baarlamaanka iyo weliba doorasho Madaxweyne oo tani ay tahay middii labaad.
Image caption Qoys ka qaxaya dagaallada Muqdisho
Somalia inteeda kale, siyaasaddeeda heer Qaran weyb caga dhigan la'dahay. Somalia gobolladeeda koofureed waxaa siyaasadda caga dhigan la' u wehliya dagaallo marba dhinac la isu eryado oo hadda ay ugu dambeeyeen kuwa aafeeyay Muqdisho iyo Beled Weyne ee u dhexeeya Dowladda Federaalka iyo ciidanka AMISOM ee kaaliya iyo Shabab iyo Xisbu Islaam oo ay marna isku jaal yihiin marna ay iyaga laftoodu is dilaan.
Shacabka Koofurta oo qaar badan ay ku dhinteen xabadda dhinacyada dagaallamaya oo qaarkood adeegsanayo madaafiic culus, ayaa qaar badan oo ka barakacay waxay hadda ku sugan yihiin caasimadda Somaliland ee Hargeysa.
Sidoo kale barakacayaashu waxay ku sugan yihiin degmooyinka Soomaaliya oo dhan, qaarkoodna waxayba u tallaabeen xeryaha Qaxootiga ee Kenya.